सुजुकी जिक्सर २५० को बुटवलमा विक्री शुभारम्भ::Best News Experience from Nepal
बुटवल। बुटवलको लागि सुजुकी टु व्हिलर्सको आधिकारीक बिक्रेता आर एस अटोमोबाईल्स ले सुजुकी जिक्सर २५० को बुटवलमा औपचारिक रुपमा बिक्री शुभारम्भ गरेको छ ।
हाल सम्म नेपालमा उपलब्ध मोटरसाईकल मध्य सबैभन्दा आर्कषक तथा सुविधाजनक यो मोटरसाईकल यस प्रकारको पहिलो त्यस्तो किसिमको मो सा हो जसमा ट्युबलेस टायर दिईएको छ । सुजुकी जिक्सर २५० मा ९,००० आर.पि.एम., २६.५ पि एस को शक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता बोकेको २४९. सि.सि.को शक्तिशालि ईन्जिन जडित छ । यो मोटरसाईकलको दुबै टायर मा ब्द्यक् डिस्क ब्रेक छ भने, १२ लि. क्षमताको पेट्रोल अट्दछ ।
डिजिटल ड्यास बोर्ड रहेको मोटरसाईकलमा एल.ई.डी हेडलाईट र एलईडी ब्याक लाईट जडान गरिएका छन् ।Fuel Injection को प्रयोग गरीएको छ यस्तै विविध विशेषताहरु पनि यस मोटरसाईकलमा रहेका छन् । फरक खालको बनावटका कारण अत्यन्त आकर्षक देखिनुका साथै आरामदायी र विस्तारित सिट का कारण यो मोटरसाईकल चलाउ“दा छुट्टै आनन्दको महशुश हुन्छ । यो मोटरसाईकल सबै २५० सि.सि.का मोटरसाईकल को समुहमा एक बेन्चमार्कको रुपमा स्थापित हुने कुरा निर्विवाद रहेको आर एस अटोमोबाईल्स निर्देशक रेशम खड्का ले जानकारी गराउनु भयो । यो युवा पुस्ताले खोजिरहेको सम्पूर्ण प्याकेजको मोटरसाईकल पनि हो । साथै सुजुकीले जिक्सर मोडलका अन्य ५ वटा मोटरसाईकल पनि विक्री शुभारम्भ गरेको छ । ५ बर्षको ईन्जिन वारेन्टीले सुजुकीका कुनै पनि बाईक र स्कुटरका चालकहरुलाई आर्थिक भारबाट निश्चिन्त गरेको छ ।
सुजुकी जापानीज बाईकहरु निर्माणमा ख्याती कमाएको विश्वकै एउटा अग्रणी कम्पनी हो र हाल विश्वका सबै देशमा यस कम्पनीको बाईक र स्कुटरहरु उपलब्ध रहेका छन् । विश्वमा सर्वाधिक पुरस्कारहरुबाट पुरस्किृत यस सुजुकी कम्पनीको नेपालमा पनि विभिन्न आकर्षक डिजाईन र कलरहरुमा उपलब्ध छन् ।
सुजुकीले बुटवल तथा आसपासका क्षेत्रमा बिक्री, बिक्री पछिको सेवा र पार्टसहरु प्रभावकारी रुपमा प्रदान गरिरहेको आर एस अटोमोबाईल्स का संचालक ले बताउनु भएको छ ।
असोज १० देखि दसैंलाई नयाँ नोट साट्न पाइने
नौ करोडको लागतमा पुल निर्माण